Injinia - Geofumadas
Nyocha CAD. Software maka injinia obodo
Ajụjụ ọnụ nke Carlos Quintanilla - QGIS
Anyị gwara Carlos Quintanilla, onye isi oche nke QGIS ugbu a, onye nyere anyị nsụgharị ya gbasara mmụba nke ọrụ ndị metụtara akụrụngwa, yana ihe a na-atụ anya n'aka ha n'ọdịnihu. Ọ bụghị ihe nzuzo na ọtụtụ ndị isi teknụzụ n'ọtụtụ ebe - iwu, injinia, na ndị ọzọ-, “the…
Engineering, innovations, qgis
Leica Geosystems webatara ngwugwu nyocha laser 3D ọhụrụ
Leica BLK360 Scanner Ihe ngwugwu ohuru a bu ihe nlere ihe nlere nke Leica BLK360, ihe nlere ihe nlere nke Leica Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition) na Leica Cyclone FIELD 360 maka mbadamba na igwe. Ndị ahịa nwere ike ịmalite ozugbo na njikọta enweghị njikọ na arụmọrụ sitere na ngwaahịa nnweta eziokwu ...
Obodo dijitalụ - otu anyị ga - esi jiri teknụzụ dị ka ihe SIEMENS na - enye
Ajụjụ ọnụ Geofumadas na Singapore na Eric Chong, Onye isi ala na onye isi ala, Siemens Ltd. Kedu otu Siemens si mee ka ọ dịrị ụwa mfe inwe obodo mara ihe? Kedu ihe onyinye gị kachasị elu nke na-enyere nke a aka? Obodo na-eche nsogbu ihu n’ihi mgbanwe nke megatrends nke mmepe obodo, mgbanwe ihu igwe, ijikọ ụwa ọnụ na ọnụ ọgụgụ mmadụ. N'ime mgbagwoju anya ha niile, ha na - emepụta ...
Geo-Engineering & TwinGeo Magazine - Nke Abụọ
Anyị na-ebi oge na-atọ ụtọ nke mgbanwe dijitalụ. Na ọzụzụ ọ bụla, mgbanwe na-agabiga na ịhapụ akwụkwọ dị mfe na usoro dị mfe na ịchọ arụmọrụ na nsonaazụ kacha mma. Ngalaba ihe owuwu bụ ihe atụ na-adọrọ mmasị, nke na-akpali site na mkpali n'ọdịnihu dị ka ...ntanetị ...
Ntughari uche nke a
Anyị na-ebi oge pụrụ iche na nkwekọrịta nke ịdọ aka ná ntị nke ọtụtụ afọ kewara. Nyocha, ihe owuwu ụlọ, akara akara, nhazi usoro, atụmatụ, iwu, ahịa. Inye otu ihe atụ nke ihe ọdịnala na-agagharị na ọdịnala; Linear maka ọrụ dị mfe, na-arụ ọrụ ma sie ike ijikwa dabere na ogo ọrụ ndị ahụ. Taa, ihe ijuanya ...
Anyị malitere Geo-Engineering - Magazin ahụ
Obi dị anyị ụtọ na anyị na-akpọsa mwepụta nke magazin Geo-engineering maka ụwa Hispaniki. Ọ ga-enwe kwa afọ, kwa afọ mbipụta dijitalụ nke ọdịnaya dị ọtụtụ, budata na pdf ma bipụta ya na isi ihe omume nke ndị na-akwado ya. Na isi akụkọ nke mbipụta a, a tụgharịrị okwu Geo-engineering, dị ka nke a ...
Kasị mma nke BIM Summit 2019
Geofumadas keere òkè na otu n'ime ihe omume ụwa kachasị mkpa metụtara BIM (Mwube Ihe Owuwu Iwu), ọ bụ European BIM Summit 2019, nke emere na AXA Auditorium n'obodo Barcelona-Spain. Ihe omume a buru ụzọ site na Ahụmịhe BIM, ebe ọ ga-ekwe omume inwe nghọta banyere ihe ga-abịa maka ụbọchị ...